Erdogan oo ku eedeeyay Mareykanka in uu taageero kooxo argagixiso - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldErdogan oo ku eedeeyay Mareykanka in uu taageero kooxo argagixiso
Erdogan oo ku eedeeyay Mareykanka in uu taageero kooxo argagixiso
December 28, 2016 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. [Sawirka: Archive]
Ankara-(Puntland Mirror) Turkiga iyo Ruushka ayaa si isku mid ugu eedeeyay Mareykanka in uu taageerayo waxay ugu yeereen “kooxo argagixiso” oo jooga gudaha dalka Suuriya.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay shalay oo Talaado ahayd in uu hayo cadaymo muujinaya in xoogaga xulufada uu Mareykanku hoggaaminayo ay taageero siiyaan kooxda Dowladda Islaamiga ah ee Ciraaq sidoo kale loo yaqaan (Daacish) iyo kooxaha Kurdiyiinta, ee lagu magacaabo (YPG) iyo (PYD).
“Waxay nagu eedeeyaan anaga in aan taageerno Daacish,” ayuu yiri Madaxweyne Erdogan.
“Hadda waxay taageero siiyaan kooxo argagixiso oo ay kamidyihiin Daacish, YPG iyo PYD. Taasi waa cadahay. Waxaanu haynaa cadaymo muujinaya, sawiro iyo muuqaalo,” ayuu ku daray Erdogan.
Si lamid ah, afhayeenka wasaaradda difaaca Ruushka ayaa Talaadadii sheegtay in go’aanka uu Mareykanku ku debcinayo hubaynta kooxaha falaagada ee Suuriya ay khatar ku tahay ciidamada Ruushka ee ku sugan gudaha dalka Suuriya.
March 27, 2017 Madaxweyne Erdogan oo sheegay in Daacish iyo ururada kale ee argagixisada ah ay dhibaato u keeneen dadka Muslimiinta ah
January 28, 2017 Raysulwasaaraha Boqortooyada Ingiriiska Theresa May oo tagtay Turkiga
April 28, 2017 Madaxweyne Erdogan: ‘Midowga Yurub su’aal ma gelin karaan dimuqraadiyadayada’
September 21, 2017 Erdogan oo ka codsaday Kurdiyiinta in ay joojiyaan aftida madax-banaanida
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee Soomaaliya oo sheegay in aan la dhaarin xubnihii la joojiyay doorashadooda
Al-Shabab militants recaptures Moqokori district after allied forces withdrew
Mogadishu-(Puntland Mirror) A high-ranking Al-Shabab commander known as Mohamed Hassan was killed in a joint military operation carried out by Somali government forces and AMISOM troops in Awdhigel area of Lower Shabelle region on Thursday, [...]
Argagixisada ISIS oo saddex askari oo katirsanaa ciidamada Puntland ku gowracday gudaha gobolka Bari
Garoowe-(Puntland Mirror) Waxa loogu yeero maleeshiyada ISIS ayaa gowracday saddex askari oo katirsan ciidamada dowladda Puntland kuwaasoo la afduubtay bilowgii asbuucaan, sida uu sheegay sargaal. Sargaal katirsan ciidamada amaanka Puntland, oo codsaday in magaciisa la [...]
Dowladda Soomaaliya oo sheegtay in ay baarayso sababta ka dambaysa burburka diyaarada African Express
Muqdisho-(Puntland Mirror) Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in ay baarayso sababta ka dambaysa burburka diyaarad ku dhacday gobolka Bay ee koonfurta Soomaaliya. “Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay ku howlantahay baaritaan daahfuran, natiijada baaritaanka Dowladda ayaa sida [...]